Kuqukuqela umlambo kuyo;
Ukuba injongo yakho kukutshintsha ubuhlanya besixeko ngokuzola okumsulwa kunye nobuhle obugqibeleleyo beNdalo, ke indawo yethu yindawo yakho nje.
Imiswe ngasekunene kwiindonga zesebe elikhulu laseMpuma loMlambo iDelaware - kwilizwe laseCatskills!
Le ndlu intle iyilwe ngolwakhiwo ime kwiiCatskills, kwiindonga zesebe esempuma loMlambo iDelaware eHarvard NY. Intlanzi kwiveranda yakho engaphambili, okanye nje ukonqena malunga negadi enkulu. Umda wepropathi kwipaki yelizwe eyi-1000 kwaye kungekho bamelwane basondeleyo, ubumfihlo bakho buqinisekisiwe. Le ndlu inegumbi lokuhlala elikhulu, igumbi lokutyela elahlukileyo kunye nekhitshi elisebenzayo eline-oveni yomgangatho wamehlo, isitovu segesi se-4 hob, iwasha yezitya njl.njl ishawari evulekileyo. Le ndlu ijikelezwe ziidesika kumanqanaba ahlukeneyo kubandakanywa nomgodi womlilo owakhelwe ngaphakathi kobo busuku basehlotyeni iBBQ's A nje iiyure ezi-2 zokuqhuba ngokulula ukusuka kwibhulorho yeGW yaseNew York.
Iimayile ezimbini ezantsi kwendlela yelizwe sisikhululo segesi / ivenkile eluncedo, kunye neHancock enye yeemayile ezili-12 kude, apho zonke iimfuno zakho zokuthenga zinokuhlangatyezwa. Sinawo onke amagumbi okulala anebhedi epheleleyo (iiduvethi ezimfumamfuma) kunye neetawuli. Ikhitshi nayo inezinto zonke ozifunayo.
Uhlaziyo ngo-Nov.2016: sisanda kugqiba inyanga ende yokuhlaziya kunye nokuhonjiswa ngokutsha kwendlu ukuze siphucule ngakumbi kwaye siqinisekise umgangatho wokuhlala kwakho.
Ngo-2020 i-intanethi iphuculwe ukuba ibeyifayibha enesantya esikhulu sokukhuphela.
4.77 · Izimvo eziyi-308
Uxolo kunye nokuzola kunye nemvakalelo yokusondela kwiNdalo.
I am a qualified professional photographer and have for years worked as such in New York. I am currently living in Cape Town South Africa and are married. We have one 14 year old son
Sizibophelele ngokupheleleyo ekuqinisekiseni ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba mnandi kwaye kubemnandi. Ngoko ke sinomphathi ohlala kufutshane - amanani akhe abonisiwe njengenxalenye yolwazi lwethu lolwamkelo.